Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eBrazil » Abaphambukeli bavunyelwe ukuba bangene eBrazil ngenqwelomoya kuphela
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba zokuhamba eBrazil • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Iindaba ezijongene noKhenketho • Safety • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Abaphambukeli bavunyelwe ukuba bangene eBrazil ngenqwelomoya kuphela
Nokuba abagonyo abagonywe ngokupheleleyo banokuba semngciphekweni wokufumana nokusasaza iiyantlukwano ze-COVID-19 kwaye kufuneka bakuphephe konke ukuya eBrazil.
Abahambi kufuneka bakuphephe konke ukuya eBrazil
Ukuba kuya kufuneka uye eBrazil, fumana ugonyo olupheleleyo ngaphambi kohambo
Abaphambukeli kufuneka babonelele ngovavanyo lwe-PCR olubi lwe-COVID-19, olwenziwe ngaphandle kweeyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba
Abasemagunyeni baseBrazil babhengeza ukuba abantu bamanye amazwe bavunyelwe ukungena ngenqwelomoya kuphela.
Ngokweengxelo, izithintelo zaziswa ngokwesicelo saseBrazil I-Arhente kaZwelonke yokuHlolwa koCoceko (Anvisa) ngokunxulumene neziphumo zesifo esibangelwa kukusasazeka kweenguqulelo ezintsha zecoronavirus kweli lizwe.
Ummiselo uthi abantu bamanye amazwe baya kudinga ukubonelela ngovavanyo olubi lwe-PCR lwe-COVID-19, olwenziwe ngaphandle kweeyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba, ukuze bavunyelwe ukuba bangene eBrazil.
Ngaphambili, uMongameli waseBrazil uJair Bolsonaro ubhenele kwiNkundla ePhakamileyo yase-France ngesicelo sokubhengeza ukungahambelani nomgaqo-siseko izithintelo ezibekiweyo ngenxa yesoyikiso esitsha se-COVID-19.
NgoJulayi ophelileyo, uBolsonaro wafumana isifo se-COVID-19 okokuqala ngqa. Emva kokuchacha, wathi akukho mfuneko yokoyika i-coronavirus, kuba phantse wonke umntu ngenye imini uya kusuleleka yiyo. Ngo-Meyi ka-2021, wathi usenokosulelwa kwakhona.
Ngokwezikhokelo zeCDC, okwangoku ihlela iBrazil njenge 'Inqanaba 4: Inqanaba eliphezulu kakhulu le-COVID-19':
Abahambi kufuneka bakuphephe konke ukuya eBrazil.
Ngenxa yemeko yangoku eBrazil nabahambi abagonywe ngokupheleleyo banokuba semngciphekweni wokufumana nokusasaza iiyantlukwano ze-COVID-19 kwaye kufuneka baphephe lonke uhambo oluya eBrazil.
Abahambi kufuneka balandele iingcebiso okanye iimfuno eBrazil, kubandakanya ukunxiba imaski kunye nokuhamba kude ekuhlaleni.
Ukuba kuya kufuneka uye eBrazil, fumana ugonyo olupheleleyo ngaphambi kohambo.